Cine Nagari – पृथ्वीनारायण शाहको बायोपिक बनाउदै सौरभ ढकाल , को को छन् कलाकार ?
पृथ्वीनारायण शाहको बायोपिक बनाउदै सौरभ ढकाल , को को छन् कलाकार ?
२५ माघ २०७४, बिहीबार ०८:३०cineadminExclusive, Feature, Movie, Nepali Movie0
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास आजको दिनमा बिस्तारै भईरहेको देखिन्छ । तर अझै पनि हेर्ने हो भने यो क्षेत्र भित्र हराउने चलन धेरै छ । एउटा चलचित्र निर्माण गर्ने अनि फेरी गाएब । यो जल्दो बल्दो सत्य हो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको जुन अहिले पनि हट्न सकेको छैन । हुन त यो क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिहरु हराउने गरेको पाइएको छ त्यसमा कलाकार , निर्देशक र निर्माता सबैको नाम पर्दछ । चलचित्रलाई राम्रो बनाउनेमा बिशेष भूमिका निर्देशकको पनि हुन्छ । तर धेरै निर्देशक पनि बेलाबेलामा गाएब भएको धेरै घटना छ । यस्तै एक नाम हो सौरभ ढकाल । उनि पनि गाएब निर्देशक भित्र नै पर्दछन । पछिल्लो समय उनि हराएको जस्तै भएका छन् । यसै बर्ष मात्र उनि निर्देशित “हिटलर” नामक चलचित्र प्रदर्शनमा आएको थियो । तर चलचित्रले ठीकठाक मात्रै सफलता हासिल गर्न सफल भयो । त्यसपछि निर्देशक सौरभ ढकाल हराए । तर मिडियाको नजर देखि धेरै टाढा भने हुन सकेनन ।
भर्खरै मात्र उनको नया कामको खुलासा भएको छ । केहि समय हराए पनि भित्रि कुरा भने केहि ठुलो नै निक्लेको छ । हो दर्शकबिन उनले एक अनलाईन मिडिया संगको कुराकानीमा आफ्नो नया प्रोजेक्टको बिषयमा खुलासा गरेका हुन् । उनका अनुसार उनि यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको बायोपिक निर्देशक गर्ने तयारीमा रहेका छन् । तर उनले यो बिषय खोल्दै गर्दा धेरै प्रश्नहरु उनि माथि तेर्सिए र उनले ति मध्य केहि कुराको भने कुराको ब्याख्या विश्लेषण गरे । यसो हेर्ने हो भने यो १७ औ सताब्दीको कुरा खुल्न आउछ । यो चलचित्रमा सबै १७ औ सताब्दीकै कुराहरु चित्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । उनले यसको लागि पनि सबै तयारी भईसकेको बताए । त्यसको लागि अमेरिकन भी.एफ.एक्स कम्पनि र इन्डियन भी.एफ.एक्स कम्पनि संग टाईअप गरिसकिएको र नेपालमा रहेको टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गरिने यसमा गरिने उनले उल्लेख गरे । यस्तै यस चलचित्रको अधिकांश टेक्निकल पार्ट इन्डियाबाट हुने कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका छन् |
यस्तै यस चलचित्रको बिषयमा गहिरिएर सोच्ने हो भने उसै पनि धेरै कलाकारहरुको मिश्रण हुने देखिन्छ । यस बिषयमा बोल्दै उनले अहिलेको चलेकै टप स्टार कलाकारहरु नै चलचित्रमा राखिने बताए । तर को को स्टार चलचित्रमा अनुबन्दित गरिने भन्ने बिषयमा भने पछि नै खुलासा गरिने कुरा पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले चलचित्रको लगानीको बारेमा पनि बताएनन । तर उनले चलचित्रको निर्माण बजेटको बिषयमा कुनै कुरा अहिले खुलासा गरेनन । त्यसै गरि उनले चलचित्र २ भाषा अंग्रेजी र नेपालीमा निर्माण हुने बताएका छन् । उनले यो सबै कुरा सुन्दा र थप केहि अनुसन्धान गर्दा चलचित्रको यति बेला व्यापक तयारी भईरहेको देखिन्छ । उनि विभिन्न ठाउँमा अनुसन्धानको लागि हिडिरहेको कुराहरु पनि उनको फेसबुकमा पोस्ट भएका तस्बिरहरुले स्पष्ट पार्दछ । सानो सानो कुरामा पनि धेरै गम्भीरताक साथ अध्ययन भईरहेको कुरा उनको तस्बिहरुले प्रष्ट पार्दछ । तस्बिरको अनुसार उनि अध्ययनकै लागि कहिले नेपालका त कहिले इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा पुगेको देखिन्छ ।
उनले मिडियामा बोलेका यी सबै कुरा सुन्दा यो प्रोजेक्ट अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट हुने ठुलो संकेत देखिन्छ । यसै पनि चलचित्रको निर्माणको लागि अन्तराष्ट्रीय कम्पनी संगको टाईअप , अंग्रेजी र नेपाली गरि २ भाषामा बन्ने , टेक्निकल पार्ट पनि हाई , नेपालको टप स्टार कलाकारहरु चलचित्रमा लिईने भनेपछि यो सबै हेर्दा कममा पनि ७-८ करोड भन्दा कम चलचित्रको बजेट हुन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि पनि एक नया आयाम हुने देखिन्छ र यो प्रोजेक्टले भनेको जस्तो तरिकाले निर्माण र बाँकी अरु सबै गरेको खण्डमा नेपाली सिनेमाको नया मार्केट र डाईमेन्सन हुने देखिन्छ । अब को को नेपालका टप स्टार कास्ट यस चलचित्रका लागि फाइनल हुने हो त्यो भने हेर्न लाएक नै हुनेछ । त्यसमाथि पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकामा को देखिने हो भन्ने कुराले पनि यति बेला सबैको मनमा उत्सुकता पैदा गरेको छ । अब यो सबै उत्सुकता पक्कै पनि आउँदा दिनमा मेटिने नै छ ।
“हिटलर” ले गर्यो दोस्रो हफ्तामा प्रवेश , सिनेमा घरमा अझै घटेन दर्शकहरुको भिड
नेपाली “हिटलर” ले पायो दर्शकहरुको माया , कलाकार देखि निर्देशक सम्मको तारिफ
प्रदर्शन मिति नजिकिदा “हिटलर” प्रति बढ्यो दर्शकहरुको उत्सुकता